Maitiro Ekuita Kuti Brand Yako Iwedzere Hunhu NeArtificial Intelligence - NewGenApps - DeepTech, FinTech, Blockchain, Cloud, Nhare, Ongororo
chakagadzirwa Intelligence, Product development
Maitiro Ekuita Kuti Rako Brand Rive Rakawanda Nehunhu hweArtificial
Mafomu echinyakare e chakagadzirwa njere isu takatoratidza kuti tinobatsira kwazvo. Asi ini ndinofunga iko kukura kweizere chakagadzirwa njere aigona kutsanangura kuguma kwerudzi rwevanhu .''- Steve Wozniak
chakagadzirwa Intelligence yave iri tekinoroji yakanyanya kukakavadzana nekuda kwezvakanakira kubereka uye mhedzisiro inogona kudzora.
Mazhinji masayendisiti makuru uye vaongorori vakataura nezve divi rayo rakanaka pamwe chete nekuparadza kusinga zivikanwi kwarinokwanisa kuita. Zvisineyi, kushandiswa kwayo kuchiri kusamira uye kusingadzivisiki. Unogona kuwana AI kubva kunharembozha kuenda pamhepo Mapuratifomu. Kubatanidzwa kwayo kwakakura uye kunobatsira. Yakavhura mikova mitsva uye yakakanganisa maindasitiri mazhinji.
Munyika yekushambadzira, AI iri kutamba basa re "humanizing" mhando. Iri kupa izwi, toni uye hunhu kune online bhizimisi kuputsa zvipingamupinyi zve digital medium uye kuunza vateereri pedyo nemhando.
Sei Zvakagadzirwa neUngwaru Kugadziridza Vatengi Zviitiko
Achibatsirwa chakagadzirwa Intelligence, iwe unogona kutora data uye nekuvaka yakanyanya kusarudzika mishandirapamwe yevatengi vako. Iyo inobatsira mukuvaka zvemukati-zvinotyairwa zvemukati izvo zvinokwanisa kubatana nevateereri. Izvo zvakacherechedzwa kuti AI inokwanisa kuona nekuendesa manzwiro emitauro nemitauro zvakangofanana nevanhu kana zvisiri nani.
Kuvaka hukama hwehukama, zvakakosha kuti ugadzire kubatana chaiko kuburikidza nemweya zvine chekuita nemukati izvo zvinova zvisingakanganwiki kune vateereri. Kana zvasvika pakusimudzira zviitiko zvevatengi, AI inogona kuumba zvirinani mazano uye zvekufungidzira zvichibva pane yevatengi maitiro maitiro.
Kunyangwe paine indasitiri, AI ine simba rekufambisa vatengi kutenga online zvinobudirira. Artificial njere mumafashoni, masevhisi-akavakirwa maindasitiri uye e-commerce Mapuratifomu taunza kufambira mberi kwakawanda kunyanya mukupa isina musono uye nekukurumidza ruzivo rwevatengi.
Hedzino dzimwe nzira AI iri kugadzira mhando dzemhando.
Achibatsirwa chakagadzirwa njere, Segmentation yevatengi yaenda padanho nyowani nyowani. Kuita kuti vatengi vanzwe vachikosheswa chave chikamu chakabatana muchirongwa chekushambadzira. Kuongorora hunhu uye rwendo rwakafanotaurwa kusvika kune yekutengesa fanera zvave nyore neAI. Ikozvino iri kupa kurudziro yakasarudzika iyo inobatsira mukuvaka hukama hwakasimba.
Disney's Inotevera-gen tech inhanho inoenda kumunhu. Kutanga, yakapa Mashiripiti Wrist Bhandi kubatsira vashanyi kutenga uye kunakidzwa nekukwira kwavo vasina kusangana neyese mitsara yekumirira. Uye zvakare, ikozvino iri kushanda kuita kuti vatengi vanoziva kuburikidza neshangu shangu zvigoneke uye zvese izvi nerubatsiro rweAI.
Kunze kweizvi, Thread, inozivikanwa UK-based zvipfeko brand inopa AI yakasarudzika mhinduro kune vatengi online. Ivo vanogona kuwana kurudziro kubva ku data rakaunganidzwa kubva kune vatengi.
Kuwana mhinduro kwakakosha kuti uve nechokwadi chekuti chigadzirwa kana sevhisi iri munzira kwayo. Zvimwe zvemberi zvekuongorora maturusi akabatanidzwa neAI anounganidza mameseji ekudzokorora, mhinduro uye zvinonzwisisika zvinonzwisisika nezvakanaka-nguva kurudziro inoitwa nevatengi. Izvi zvinobatsira zvakanyanya mabhizinesi ekuvandudza masevhisi avo uye zvigadzirwa uye kuvaka chisungo chakasimba nevatengi.
Sezvo musika wedhijitari uri kuwedzera kusimba, zvakakosha kune bhizimisi varidzi kuti vanzwisise marwadzo emutengi uye vanoshuvira kugadzira chiitiko chisina musono. Nzira dzakashandiswa mumaitiro echinyakare dzatadza kupa mazano akasimba ekuvandudza. Asi nerubatsiro rweAI, zvave kugona kunyura mumusika uye kuchera nzira dzinofambiswa nehunyanzvi dzekuunganidza mhinduro dzevatengi.
Maererano ne Kushambadzira Chati, pazasi pekuratidzwa pane mikana yeAI yakashandura iyo kutsvakurudza misika industry.
Inovandudzwa Vatengi Chiitiko kuburikidza neChatbot
Chatbots pasina kupokana ndeimwe yezvipo zvakakosha zve chakagadzirwa Intelligence ku eCommerce industry. Nhaurirano bots inosimudzira ruzivo rwevatengi nekubata vanogona kutungamira uye kuona maitiro ekuita. Iyo data yakaunganidzwa rubatsiro mukusimbisa iyo yekutengesa funnel. Machatbots anoita sehuropi hwevanhu. Ivo vanoramba vachitarisa maitiro emuenzi uye kuita kurudziro yakakodzera inogona kushandiswa kugadzira intuitive interfaces.
Chatbots ine basa kana iyo inouya kushoponi kushambadzira naizvo. Vabatsiri vezwi vakaita seAmazon's Alexa uye Imba yeGoogle inogona kukurudzira vatengi kutenga nekupa akakodzera makuponi uye kuderedzwa kunopihwa. Asi izvo, Google nechitoro chezvitoro Target yakaedza nezwi-yakaiswa madhora gumi nemashanu kuderedzwa kuyedza kushanda kwavo. Vatengi vaifanira kuti "spring into Target," yavo Imba yeGoogle mudziyo kuti uvaendese kune iyo inopa.
Dzora iyo Clock Mhinduro
AI inobatsira mukupa maitiro akareruka ekubhurawuza kubatsira vashanyi kuwana mhinduro nekukurumidza pavanenge vachifambisa online. Kwete izvi chete, maturusi eAI anobatsira mukupa kurudziro yechigadzirwa uye maonero nekuongorora zvakatengwa kare.
Nerubatsiro rweAI, iwe unogona kupa kwakatenderedza- iyo-wachi masevhisi pamhepo. Gadzira zvoga mhinduro uye uve nechokwadi chekuchengetedza mhando yako online nguva dzese. Vako vashanyi vanogona kufambiswa kuita yakadzidziswa kutenga sarudzo pamhepo, chero pavanoda.
Kushushikana-Kuchengeta kuburikidza neAlgorithms
AI yakapa nyika chimiro chitsva cherobhoti. Imwe inonzwisisa manzwiro uye inobatsira vanhu kubatana. Kubva pakupindura kumibvunzo kusvika pakudyidzana nevatengi, marobhoti ane AI ane zvakawanda zvekupa. Zvisinei, mupiro wavo mukuru kune a bhizimisi inogona kuve kuongororwa kwemanzwiro evanhu.
Kutariswa kumeso, kuzivikanwa kwenzwi uye nehungwaru hwepfungwa maficha eAI anogona kudzoreredzwa kugadzirisazve ruzivo rwevatengi. Google Mubatsiri, Apple's Siri, uye Amazon's Alexa inogona kuburitsa yakanaka dhatabhesi kuti unzwisise mutengi manzwiro. Kuratidzwa kwaGartner kunoti, "Na2022, chako kifaa chinozoziva zvakawanda nezve mamiriro ako epamoyo kupfuura yako mhuri." Nemavara anoshandisa iyi data zvinobudirira, kubatanidza vatengi kungava mhepo.
AI inogadzira ingangove yekushandisa yevatengesi kuti vachere pasi yakazara data iyo inogona kubatsira kubatanidza dzakasiyana huwandu hwevanhu. Kana iwe uchida kuvaka hukama huri nani nevateereri vako, shandisa kugona kweAI uye tarisira mhedzisiro yakanaka.
Uchishandisa algorithms, marobhoti uye Machine kudzidza zvinobudirira kunogona kuisa hupenyu muchiratidzo chako uye kuchimisa kubva pakuva inotonhora, yemubatanidzwa. AI chibereko chepfungwa dzemunhu. Iyo inogona kushandiswa kusimudzira yakasimba, yechokwadi uye yemweya kubatana nevatengi.